Liverpool iyo Bayern oo is mari wayey iyo Lyon oo taako u dhigatya Barcelona – Gool FM
(Yurub ) 20 Feb 2019 Kulamo ka tirsan tartan Champions League wareegiisa 16-ka ayaa la ciyaaray waxaana fooda is daray kooxaha Liverpool iyo Bayer Munech , halka kulan kale ay wada ciyaareen kooxaha Lyon iyo Barcelona .
Aan ku horeenaa kulanka xiisaha lahaa ee Liverpool iyo Bayer Munchun , waxa uu ahaa kulan xamaasadiisa wata labada dhinacba waxa ay soo bandhigeen kubad ay ugu riyaaqeen taageerayaashii usoo daawasho tagay .
Kooxda Liverpool oo garoonkeeda lagu ciyaarayey ayaa ku soo gashay daradar xoogan qeebtii koowaad ee ciyaarta waxa ayna sameeyeen isku dayo badan oo gool loo filan karay uma suura galin in ay gool u badalaan .
Geesta kale kooxda Bayer ayaa dhankeeda la timid kubad cajiib ah balse aad ayaa lowga gacan sareeyey qeebtii koowaad ee ciyaarta , wallow Bayer ay Liverpool aya kaga wanaagsaneed kubad heysashada qeebtii koowaad .
Waxaa soo dhamaday qeebtii koowaad ee ciyaarata , labada koox ayaana awoodi waayey in ay dhaliyaan gool , nasiino ka dib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambe ee ciyaarta .
Qeebtii dambe ee ciyaarta labada koox ayaa sameeyey isku dayo badan balse midna shabaqa ma gaarin Reds oo garoonkeeda lagu ciyaarayey ayaa uga dhex muuqatay kulanka waxa ayna sameyeen dadaalo badal balse nasiibka ayaa ka hiiliyey .
Ugu dambeen kulank ayaa kuu soo idlaaday bareejo , kulanka lugta labaad ayaana ka dhici doono garoonka kooxda Bayer .
Dhinaca kale kooxda Barcelona ayaa bareejo la dhaafi weysay kooxda Lyon oo sameesay geesinimo waxa ayna gool u diiday weerarka kooxda Barcelona .
Barca ayaa ku fashilantay in ay guul garaan lugta koowaad ee wareega 16-ka in kastoo lugta labaad lagu ciyaarayo garoonkooda balse waxaa dhibaato ku noqon doonta gool away in laga dhaliyo taas oo rajo weyn gilin karta kooxda Lyon.
Ciyaart ayaana ku soo dhamaatay bareejo labada koox ayaana is dhaafi waaya xili Lyon ayaa bareejadan ay ugu dhigantahay guul.
HORDHAC : Atletico Madrid VS Juventus oo caawa ku balansan garoonka Metropolitano